guriga / Aqoon isweydaarsi
765 Waxa daabacay maamulka Nofeembar-13-2020
Kani waa warshaddeenna, oo ku taal Degmada Warshadaha ee Huian Chengnan, Quanzhou, magaalo xeebeed ku taal Fujian, Shiinaha, taas oo ku raaxeysata sumcadda "Magaalada boorsooyinka & kiisaska".
Boorsooyinka Hongsheng waxaa la aasaasay 1993. Shirkaddu waxay markii hore ku lug lahayd ganacsiyada la xiriira dhoofinta dhoofinta, in muddo ahna waxay si tartiib tartiib ah ugu kala duwanaanaysay naqshadeynta wax soo saarka, horumarinta, soo saaridda, iyo maaraynta silsiladda u adeegidda macaamiisha adduunka oo idil.
Isla markaa, sumadeena gaarka ah "MONKKING", oo ka diiwaan gashan 22 dal oo dibada ah, waxaanna ka dhignay xafiisyo suuq geyn ah magaalooyinka Moscow, Russia iyo Xiamen, Shiinaha, waxay ku raaxeysanayaan caan ka noqoshada adduunka oo dhan.
Waxaan had iyo jeer u hoggaansanahay mabaadi'da "Iimaanka Wanaagsan, Tayada, Maareynta Sayniska", oo waxaan ku adkeysaneynaa "Tayada Koowaad". Ka go'an inaad noqoto shirkad horseed u ah warshadaha, si aad u abuurto sumcad gudaha iyo caalami ah oo xoog leh